आईसीई टिम अफ द टुर्नामेन्ट घोषणा, को-को परे ? (नामसहित)
एजेन्सी, ३० असार । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको १२ औँ संस्करण आइतबार सकिएको छ ।
आइतबारको निकै रोमाञ्चक फाइनल खेलमा इंग्ल्याण्डले न्यूजिल्याण्डलाई पराजित गरी विश्व च्याम्पियन बनेको छ । इंग्ल्याण्डका बेन स्टोक्स ‘म्यान अफ् द म्याच’ घोषित हुँदा न्यूजिल्याण्डको केन विलियमसन ‘प्लेयर अफ् द टुर्नामेन्ट’ घोषित भए ।
त्यस्तै आईसीसीले ‘टिम अफ् द टुर्नामेन्ट’ को पनि घोषणा गरेको छ । जसमा इंग्ल्याण्डका खेलाडीले वर्चश्व जमाएका छन् । इंग्ल्याण्डका चार जना खेलाडी टिम अफ् द टुर्नामेन्टमा अटाएका छन् ।
आईसीसी ‘टिम अफ् द टुर्नामेन्ट’ को पहिलो र दोस्रो नम्बरमा भारतका ब्याट्सम्यान रोहित शर्मा र इंग्ल्याण्डका ब्याट्सम्यान जेसन रोय अटाएका छन् । त्यस्तै तेस्रो र चौथो खेलाडीमा क्रमशः न्यूजिल्याण्डका ब्याट्सम्यान केन विलियम्सन (कप्तान) र बंगलादेशका अलराउण्डर शाकिब अल हसन रहेका छन् ।
पाँचौ र छैटौँ स्थानमा इंग्ल्याण्डकै ब्याट्सम्यान जोए रुट र अलराउण्डर बेन स्टोक्स छन् । सातौँ नम्बरमा अष्ट्रेलियाका विकेटकिपर एलेक्स क्यारी, आठौँ नम्बरमा अष्ट्रेलियाकै तीव्र गतिका बलर मिचेल स्टार्क रहेका छन् ।
‘टिम अफ द टुर्नामेन्ट’ को नवौँ नम्बरमा इंग्ल्याण्डका तीव्र गतिका बलर जोफ्रा आर्चर, १० औँ नम्बरमा न्यूजिल्याण्डका मध्यम गतिका बलर लकी फर्गुसन रहेका छन् । ११ औँ नम्बरमा भारतका तीव्र गतिका बलर जसप्रिल बुमराह र १२ औँ नम्बरमा न्यूजिल्याण्डका तीव्र गतिका बलर ट्रेन्ट बोल्ट रहेका छन् ।
दीपक मनाङ्गेविरुद्ध जाहेरी, थपड हानी अभद्र व्यवहार गरेको आरोप
बार्सिलोनाको सानदार कमव्याकमा ग्रिजम्यानको दुई गोल
टोटेनहम लिगको छैटौँ स्थानमा उक्लियो
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग : मछिन्द्र विजयी
वाग्मती प्रदेशका जिल्लामा खेलकूदका पदाधिकारी नियुक्त
ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र र पुलिस भिड्दै
आईसीसी यू१९ विश्वकपः वेस्ट इन्डिज र अष्ट्रेलिया विजयी
अभागी ओजिल !
‘एकसाथ तीनवटै उपाधि जित्न चाहन्छु’
स्टार खेलाडी रिनायरलाई रियलले किन्यो
रियल मड्रिडमा आत्तिएका दुई स्टार खेलाडी !
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग : ब्रिगेड र सङ्कटाले अङ्क बाँडे
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज दुई खेल
अष्ट्रेलियाविरुद्धको तीन खेलको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज भारतलाई
इन्टर मिलानलाई ४ अंकले पछि पार्दै युभेन्टस शीर्षस्थानमा थप बलियो
ग्रानडालाई हराउँदै ला लिगाको शीर्षस्थानमा उक्लियो बार्सिलोना
स्टिभको शतकसँगै अष्ट्रेलियाद्वारा भारतसामु २८७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत
‘ए’ डिभिजन लिग : एनआरटीद्वारा एपिएफ पराजित
ए डिभिजन लिग : आज दुई खेल हुँदै